Uzigeza kanjani izicathulo zakho futhi uzenze ziphelele | Bezzia
UToñy Torres | 17/07/2021 16:00 | Ikhaya
Uma ungomunye wabathandi benduduzo futhi uhlanganisa izicathulo zakho nanoma yikuphi ukubukeka, unenhlanhla ngoba zisemgqeni ogcwele. Noma ngabe ziyizindwangu, amateki amibalabala noma ezemidlalo zakudala, amateki angenye yezingubo ozithandayo. Ungawahlanganisa nganoma yisiphi isitayela futhi ugqoke kahle futhi ngokunethezeka.
Manje, ukugqoka amateki futhi ube muhle akuyona into elula kangako, ngoba yizicathulo ezinamabala kalula. Futhi ayikho into ekhumula ngaphezu kwezicathulo ezingcolile. Uma ungaqiniseki ukuthi uzigeza kanjani izicathulo zakho nokuthi ziphelele, ungaphuthelwa yizo zonke izeluleko namasu esikushiya ngezansi.
Ugeza kanjani izicathulo?
Konke ama-slippers Awafani, empeleni, kunezinhlobo eziningi zezindwangu eziyinkimbinkimbi ezenza umsebenzi wokuhlanza izicathulo ube ngaphezulu. Ngaphambi kokuzigeza, kufanele uhlole izincomo zomkhiqizi bese uthola ukuthi zingafakwa yini kumshini wokuwasha noma cha. Yize kungenzeka ukuthi umshini ungazigeza ngaphandle kwenkinga, kepha ngamathiphu ambalwa wokushisa nokujikeleza.
Ukugeza izicathulo zakho nokuzenza ziphelele, kufanele uhlukanise izingxenye zazo futhi uzigeze ngokwehlukana. Qaphela lawa macebiso:
Izintambo: Awukwazi ukugeza izicathulo ezifakwe izintambo, ngoba azikwazi ukuhlanzwa kahle. Ngaphezu kwalokho, zizovimbela amanzi nensipho ukuthi ifinyelele kuwo wonke amakhona wengaphakathi lesicathulo. Susa izintambo bese uzifaka emanzini ngamanzi, i-bleaching detergent, noma i-baking soda.
Ama-insoles: Kuma-insoles amabhaktheriya akhiqiza iphunga elibi ayaqoqeka. Ukuzihlanza kaningi kubalulekile ukugwema ukhunta nephunga lonyawo. Kepha kungcono ukuwageza ngesandla, ngoba emshinini wokuwasha angonakala futhi ahlukane kalula. Thatha izifanekiso bese uzifaka enhlanganisweni yamanzi, uviniga omhlophe nesoda yokubhaka.
Okuwukuphela: Ingxenye ethambekele ekungcoleni kakhulu iyona yodwa, ngakho-ke ungayigeza kaningi ngaphandle kokugeza izicathulo ngokuphelele. Sebenzisa ibhulashi elincane, thayipha ibhulashi le-nail, gcoba ngomuthi wokuhlanza kuze kususwe ukungcola.
Amatshe amhlophe: Uma kuphela isicathulo sakho simhlophe, ungasebenzisa umuthi wokuxubha mhlophe. Hlikihla ngebhulashi elidala futhi uzowubona umehluko.
Indwangu: Uma izicathulo zakho zingagezwa ngomshini, kufanele uhlele ukugeza okufishane, kubanda futhi ngaphandle kokuwasha. Yize kungakhuthazwa ukubeka izicathulo emshinini wokuwasha kaningi, ngoba izingxenye zensimbi zezintambo kanye nemicu yezicathulo kungalimala kalula.
Uwashwa kanjani amateki amhlophe
Alikho ihlobo elingasebenzisi amateki amhlophe, anethezekile, kulula ukuwahlanganisa nanoma iyiphi ingubo futhi ilungele usuku nosuku. Ingxenye embi ukuthi zingcola kalula, kwesinye isikhathi kuyenqena ukuzisebenzisa. Ikakhulukazi uma ungazi ukuthi ungawahlanza kanjani ukuze aqhubeke nokugcina umbala omhlophe njengosuku lokuqala. Izindaba ezimnandi ukuthi ngalezi zindlela zobuqili uzokwenza amateki akho amhlophe abukeke emisha sha.
Ukugeza amateki akho endwangu emhlophe, qala ngokukhipha izintambo bese uwageza ngokwehlukana. Bese usebenzisa ibhulashi elincane ukususa uthuli lwendwangu. Uma zinamabala, lungisa ingxube yamanzi, uviniga omhlophe ne-bicarbonate bese ugcoba ibhulashi engxenyeni ezolashwa. Manje, lungisa umcengezi ngamanzi afudumele, engeza izipuni eziyi-2 ezinhle zesoda kanye nenye engu-2 yensipho yesitsha ngaphandle kwedayi.
Cwilisa ama-slippers endwangu imizuzu embalwa bese usebenzisa ibhulashi ukuhlanza kahle yonke indwangu. Hlanza insipho ngendwangu ye-microfiber efakwe emanzini abandayo. Ukuze uqede, bayeke ome futhi bagweme ukukhanya kwelanga. Yize iyi-bleach yemvelo, ingalimaza indwangu yezicathulo zakho. Zibeke endaweni ebushelelezi bese uzivumela ukuthi zome ngokuphelele ngaphambi kokuzisebenzisa futhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Uzigeza kanjani izicathulo zakho futhi uzenze zibukeke zilungile
Ukugeza ilanga ukhulelwe: yebo noma cha?